Dakota Fanning ayaa ka jawaabtay falcelintii ay ku samaysay haweenay muslimad ah oo ku jirtay filim cusub - Dhaqanka Pop
Dakota Fanning ayaa ka jawaabtay falcelintii ay ku samaysay haweenay muslimad ah oo ku jirtay filim cusub
Dakota Fanning waa doorka soo socda ee ah haweeney muslim ah filimka Macaanka Caloosha waxaa la kulmay muran. Haddaba, Aktarada ayaa barteeda Instagram -ka ku difaacday qeybteeda.
Fanning ayaa caddeysay kaalinteeda, qoraalkeeda, ma ciyaaro haweeney Itoobiyaan ah. Waxaan ciyaaraa haweeney Ingiriis ah oo waalidkeed ka tageen markii ay ahayd toddoba jir Afrika waxayna ku barbaartay Muslim.
Waxay sii wadday, Dabcigayga, Lilly, safaradii ay ku tagtay Itoobiya waxayna ku habsatay burburkii dagaallada sokeeye. Markii dambe waxaa loo diray 'guriga' England, meel ay ka timid laakiin waligeed ma aqoon. Iyada oo ku saleysan buug ay qortay Camilla Gibb, filimkan waxaa qeyb ahaan lagu sameeyay Itoobiya, waxaa agaasime ka ah nin Itoobiyaan ah waxaana ku jira haween badan oo Itoobiyaan ah. Waxay ii ahayd mudnaan weyn inaan qayb ka noqdo sheekadan.
Waxay raacisay, Filimku wuxuu ku saabsan yahay macnaha gurigu u leeyahay dadka naftooda ka qaxay iyo qoysaska iyo bulshooyinka ay doortaan iyo kuwa iyaga doorta.
Dakota Fanning ayaa ku cadeynaysa IG in dabeecadeeda aysan ahayn haweeney Itoobiyaan ah. Maya, aad bay uga sii daran tahay: waa agoon caddaan ah oo laga tegey Itoobiya, ku barbaartay Muslim, u qaxday England qaxooti ahaan si ay uga baxsato dagaal sokeeye halkaas oo hadafkeedu yahay inay dib u mideyso qoysaska soogalootiga ah ee Muslimka ah pic.twitter.com/DMaGi5kUKR
— ooeygooey (@ooeygooey) Sebtember 5, 2019
Ka dib Waqtiga kama dambaysta ah ee Hollywood tweeted clip gaaban oo laga soo duubay filimka, dadku waxay bilaabeen inay jiidaan Fanning. Iyaga oo aan garanayn dulucda buugga, qaar baa la yaabay sababta Fanning loogu jilay doorkan, halkii uu ka noqon lahaa jilaa Itoobiyaan ah ama Muslim ah. Kuwo kale waxay u ekeeyeen kabka Scarlett Johanssons u janjeerida qaadashada doorka ay tahay inay buuxiyaan beelaha laga tirada badan yahay ee ay sawiraan. Filimka ayaa sidoo kale lagu eedeeyay cadaanka cad, per Cosmopolitan .
Filimka waxaa agaasime ka ah Zee Mehari, oo Itoobiyaan ah - jilaayaashana waxay ku hadlaan af Amxaar, Carabi, iyo Ingiriis filimka. Macaanka Caloosha waxaa lagu wadaa in lagu soo bandhigo Bandhig Faneedka Caalamiga ah ee Toronto 7 -da Sebtembar.
sharaabaad madow oo leh cirka cirka
khloe kardashian iyo lamar odom cajalad galmo
sida loo sameeyo keega sanduuq ka qoyan